Isicoci sethanga,umatshini osebenza ngesandla wokuthintela umhlaba
Ukusetyenziswa komatshini wokucheba wethanga
Umatshini osasaza umthi wepenki isetyenziselwa i-dehusking peanut kunye ne -nutnut . Umshini weVenkile yencwadana yesikhonkwane somatshini ilitha ilula, ixabiso eliphantsi ,Ilungele ukusetyenziswa ngamakhaya kunye namashishini amancinci.
Amantongomane sisityalo esixabisekileyo nesibalulekileyo esityalwa phantse kwihlabathi liphela.Babonelela amafama amancinci amancinci ngekota yengeniso yabo yonyaka yezolimo kwelinye ilizwe laseAfrika. . I-peanut kufuneka iqhekezwe ukuze ifumane amantongomane, ke ingasetyenziselwa ngakumbi ukukhutshwa kweoyile kwaye isetyenziswe kwizinto zokutya.
Indlela yendabuko yokukhupha ingca kumhlaba wamanzi kukuba uyiqhekeze ngesandla,kodwa xa isixa esikhulu samandongomane kufuneka sisebenze kule ndlela ichitha ixesha .Ukusithelisha izinto ezininzi kumncinci omncinci wase-Afrika kwenziwa kwangaphambili ngesandla. Ngelixa ukuhambisa ngesandla kungagcina inani eliphantsi lokwaphuka kwe kernel,kodwa kuyakuthatha umsebenzi omninzi kunye nemveliso ephantsi.Ukuthunyelwa kwesandla ngesandla kubeka uxinzelelo olukhulu kubalimi.Akungafuneki nje kuphela iimbatyisi zeqokobhe phambi kokuphela kwexesha lokuthengisa.,kodwa bafuna umsebenzi kumasimi avuniweyo. Kuyimfuneko ukuba basebenzise umatshini wokukhusela umhlaba ukuze ubancede ekusebenzeni nzima.
Umatshini waseVictor Fama uphuhlise umatshini osebenzisa isandla esisebenza ngethanga,yeyenzelwe amafama asemaphandleni kunye nakwimizi mveliso emincinci.,inokuwaphula lula igobolondo lomhlaba ngaphandle koncedo lombane olufunekayo.
Ukusebenza komgaqo-siseko woMatshini weNzululwazi wePenetri yokuhambisa izixhobo
Isandla esisebenzayo samapheya senziwe ngesakhelo sokuxhoma esibekwe kwindlu yentsimbi enesikhuselo esisezantsi. Njengoko isakhelo senziwe crank, amantongomane angena kwisithuba phakathi kweingqengqelo kunye nescreen. Iyasebenza, Amandongomane e-hopper atyelwe ekucaceni phakathi kwe-roller kunye ne-concave ngelixa i-roller ijika. I-peanut ke emva koko igcinwe ngokukhupha isenzo phakathi kwe-roller kunye nescreen. Emva kokuba i -nutnut ishenxisiwe, i-kernel kunye neqokobhe liwela kwiscreen.
Iiparamitha zobuchwephesha boomatshini bokugcina umhlaba wamanzi amdaka
Umzekelo I-VHS-1 I-VHS-2
Umthamo 40~ 50kg / h 100~ I-150kg / h
Amandla Incwadi yezandla Incwadi yezandla
Ubungakanani 68*35*115i-CM 85*60*130i-CM
Ubunzima 25kgs 80kgs
ividiyo yomatshini wokucheba nge peanut